तपाई परमेश्वरको कृपा पात्र बन्न सक्नुहुन्छ । : NepalChurch.com
तपाई परमेश्वरको कृपा पात्र बन्न सक्नुहुन्छ ।
[0] February 17, 2019	| NC Admin
स्त्रीहरू परमेश्वरका कृपा पात्र हुन्छन् । मरियमलाई परमेश्वरको कृपा पात्र बनाउनुभयो । परमेश्वरको योजना मित्र तपाईको बोलावट भएको छ।
एकदिन मेरी श्रीमतिले मलाई स्त्रीहरूको शारीरिक अवस्था र छोरा मानिसहरूको शारीरिक अवस्थाको बारेमा बताइन् । महिनैपिच्छे रजस्वाला हुनअघि त्यसको कष्ट पनि गार्‍हो हुन्छ त्यति मात्र होइन आमा बन्ने काम पनि त्यति सजिलो छैन भनेर मलाई सम्झाइन् । मैले स्त्रीहरू परमेश्वरका कृपा-पात्र हुन्छन् भनेर उत्साह दिएँ ।
परमेश्वरले मरियमको जीवनमा ठूलो योजना राख्नु भएको थियो । स्वर्गदूतले त्यस खबरलाई मरियमकहाँ पुर्‍याए । त्यो सन्देशचाहिँ ‘हे कृपा-पात्र तिमीलाई अभिवादन! परमप्रभु तिमीसँग हुनुहुन्छ ‘ (पद २८) । परमेश्वरले तपाईंबाट ठूलो योजना राख्नु भएको छ । तपाईं परमेश्वरको कृपा-पात्र हुनुहुन्छ । के तपाईं तपाईं परमेश्वरको कृपा-पात्रमध्ये हुनुहुन्छ? तपाईंले आफ्नो बोलावट र परमेश्वरको योजनालाई समातिरहनु भएको होस् ।
प्रार्थना: हे येशू तपाईंले मलाई तपाईंको कृपा-पात्र बनाउनु भएको निम्ति धन्यवाद, मद्वारा ठूलो कार्य गर्नुहोस् ।
लेखक -हर्क खडका
हिमालय टेक्नोलोजी सोलुसन्स् प्रालि
Danda Bazar, Dhankuta. Photo by Sarju Rijal
साँचो अभिवादन गर्नुहोस् »